ဘဲလ်က X-22A DOWNLOAD FSX & P3D - Rikoooo
အရွယ် 17.7 ကို MB
downloads ရယူရန္ 16 588
Kazunori Ito က FSX မိုက်ကယ် Pook အားဖြင့် update ကို
အဆိုပါဘဲလ်က X-22 တစ်ဦးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု V ကို / STOL ခဲ့သည် X-plane လေးပြွန်ပရိတ်သတ်တွေစောင်းအတူ။ ယူပါ-ချွတ်ရွေးချယ်အထက်သို့ဒေါင်လိုက်စောင်းပန်ကာနှင့်အတူ, ဒါမှမဟုတ်မှာခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 45 °ရှေ့ဆက်စောင်းအဆိုပါ nacelles နှင့်အတူတိုတောင်းတဲ့လေယာဉ်ပြေးလမ်းပေါ်ဖြစ်စေပေါ်ပေါက်ဖို့ဖြစ်တယ်။ ထို့အပြင် X-22 ထိုကဲ့သို့သောရှေ့ Hiller X-18 နှင့် X-22 ဆက်ခံသည်ဘဲလ် XV-15 အဖြစ်ဒေါင်လိုက်ယူ-ချွတ်တပ်များပို့ဆောင်ရေး၏နည်းဗျူဟာလျှောက်လွှာသို့ပိုပြီးထိုးထွင်းသိမြင်မှုပေးခဲ့ပါသည်။ အခြားပရိုဂရမ်လိုအပ်ချက်မှာအနည်းဆုံး 525 km / h ၏အဆင့်ကိုလေယာဉ်ခရီးစဉ်အတွက်စစ်မှန်သော Airspeed ခဲ့ (326 တစ်နာရီမိုင်; 283 မိုင်) ။ (ဝီကီပီးဒီးယား) ။
ဤ add-on is included with two repaints and one with metallic texture, basic VC, 2d panel and custom sounds. use the F6 and F7 keys to guide the rotors.
Author: Kazunori Ito က FSX မိုက်ကယ် Pook အားဖြင့် update ကို